Yr Hen Becws — “INdala yokubhaka”, uGlan Conwy.
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguLynne & Richard
Iinkwenkwezi ezi-5 - -18 Century yangaphambili indawo yokubhaka enendawo yokuhlala yangoku ngaphezulu kwemigangatho emi-3, uninzi lwabalinganiswa kunye nemibono emangalisayo. UYr Hen Becws usembindini weyona ndawo ibalaseleyo yokuzonwabisa yendalo yaseYurophu. Eli khaya likwinduli yelali kufutshane nazo zonke izithuthi zikawonke-wonke kwaye ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ye-A55 kunye ne-A470, ekuvumela ukuba ufikelele ngokulula kuyo yonke into enikezelwa nguMntla Wales.
Ikhaya lakho linendawo yokuhlala eyaneleyo yangaphakathi nangaphandle.
Uya kuba namagumbi okulala amabini aphindwe kabini onke anomabonakude, amagumbi okuphumla ama-2, ikhitshi evulekileyo / igumbi lokutyela kunye negumbi lokuhlambela eli-2 elibekwe ngaphezulu kwemigangatho emi-3.
Kukho ibalcony enkulu enezihlalo ezijonge umbono omangalisayo weConwy Estuary, iRSPB Conwy, iiRange zeeNtaba zeOgwen Valley kunye neSnowdonia ngaphaya. Kumgangatho ophantsi kukho indawo eyongezelelweyo egqunyiweyo yangaphandle ene-bar kunye nezihlalo. Igadi inendawo yokuphumla elangeni kunye ne-BBQ yezitena ezinkulu.
Le ndlu ikwindawo yokuhlala yaseGlan Conwy kwaye kumgama wokuhamba wezinto ezikufutshane (iZiko leGadi laseSnowdonia, iCafe kunye neePubs) iGlan Conwy inesikhululo sikaloliwe kunye nenkonzo yebhasi kwaye ikwindawo efanelekileyo nje imayile enye ukusuka kwindlela enkulu ( A55) ukuya kuMntla Wales. Ngezikhululo zeenqwelomoya zaseManchester kunye neLiverpool kwiyure nje enye. Euston ukuya eLlandudno Junction ziiyure ezi-3 nemizuzu engama-35 ngololiwe.
Siyimizuzu engama-20 nje ukusuka kwiZip World eziqhayisa ngocingo lweZip olude kakhulu eYurophu, iSlate Caverns kunye neBounce Ezantsi (trampoline kwimiqolomba). Kwimizuzu nje eli-10 kude uya kufumana kwakhona iPlummet 2 eyehlayo simahla ye-100 yeenyawo, eyokuqala yohlobo lwayo e-UK, i-Forest Coaster kunye ne-Tree Tops iintambo eziphakamileyo.
Sikwiikhilomitha ezi-3 ukusuka kwidolophu yembali yeConwy kunye neNqaba yayo entle ejikeleze idolophu. Ibekwe kwizibuko elingaphakathi kweendonga zenqaba uya kufumana eyona ndlu incinci e-UK, iivenkile ezizodwa, iivenkile zokutyela kunye nemivalo, yenye yezona ndawo zintle zokutyela zaseItali kule ndawo. I-1/2 yeemayile ngaphezulu kubuxoki eConwy (eCaernarfonshire) i-Championship Links kwiKhosi yeGalufa, ebanjwe kwi-Curtis Cup ka-2021.
Iikhilomitha nje ezi-5 ukusuka elwandle yidolophu engaselwandle iLlandudno enendawo yayo ende kunye ne-Victorian Pier. I-Llandudno likhaya kwimisebenzi eyahlukeneyo ukuze ihambelane nawo onke amaqela eminyaka kuquka i-Dry Ski Slope kunye ne-Tobogganing kunye ne-Snowboarding; I-Great Orme Tramway ihambisa abagibeli nge-Great Orme Country Park kunye ne-Nature Reserve ukuya kwingqungquthela; Okanye unyuke ngeyona moto inde yeCable eBritani. I-Llandudno ikwaqhayisa ngamabala egalufa amabini abalaseleyo. Kuni bathandi bethiyetha kukho i-Venue Cymru ebamba umculo omangalisayo kunye nemiboniso unyaka wonke.
IColwyn Bay ikumgama oziikhilomitha ezi-5, idolophu engaselwandle enolwandle olusandula ukwenziwa lwangoku olusisigxina kunye nomda wamanzi, ilungele imidlalo yamanzi kunye nokuqesha izixhobo, kwaye ilungile nangaliphi na ixesha ngenxa yolwandle olomileyo. IColwyn Bay ikwalikhaya leRGC Welsh Rugby Union Team. I-Welsh Mountain Zoo eyavulwa ngo-1963 kuluntu inomhlaba ongaphezulu kweehektare ezingama-35 kwaye inikezelwe kulondolozo.
Umbuki zindwendwe ngu- Lynne & Richard
Nceda uqhagamshelane nathi ukuba kukho nantoni na esinokuyenza, sisekhaya kwaye siyavuya ukukunceda ukuba ujabulele iholide yakho, ingaba iingcebiso kwiivenkile zokutyela, imisebenzi yokubhuka okanye isikhululo seenqwelomoya / ukuhanjiswa koololiwe.
Nceda uqhagamshelane nathi ukuba kukho nantoni na esinokuyenza, sisekhaya kwaye siyavuya ukukunceda ukuba ujabulele iholide yakho, ingaba iingcebiso kwiivenkile zokutyela, imiseben…
ULynne & Richard yi-Superhost